लामखुट्टेले कस्ता मानिसलाई बढी टो’क्छ ? जानी राखौं – Jagaran Nepal
लामखुट्टेले कस्ता मानिसलाई बढी टो’क्छ ? जानी राखौं
काठमाडौं । गर्मि महिना विशेषत वर्खाको समयमा लामखुट्टेले अत्या’धिक सता’उने गर्छ । यो समयमा लामखुट्टेहरु बढी सक्रिय हुन्छन्, त्यसैले यो समय धेरै नै सता’उने गर्छ । लामखुट्टेको टो’काइबाट बच्न हामीले अनेकौं उपाय अनि लगाइरहेका हुन्छौं । तर एक अध्ययनले यी मानिसहरुलाई लामखुट्टेले बढी टोक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
१. तपाईंको रक्त समूह ओ हुनपर्छः एक अध्यननका अनुसार लामखुट्टेले रक्त समुह अनुसार मानिसहरुलाई टो’क्ने गरेको पाइन्छ । सन् २००४ मा जर्नल अफ मेडिकल इन्टोमोलोजीमा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार ओ ग्रुप समूहका मानिसले अन्य रक्त समूह (ए, बी र एबी) को तुलनामा बढी लामखुट्टे आकर्षित गर्छन्।
सो अध्ययन अनुसार ‘ओ’ पछि लामखुट्टेले क्रमशः रक्त समूह ‘ए’, ‘बी’ र अन्त्यमा ‘एबी’ मन पराउँछ । तसर्थ तपाईलाई लामखुट्टेले टो’क्नुमा रगत समूह ‘ओ’ हुनुपर्छ।
२. तपाईं गर्भवती हुनुपर्छः बयस्क र बालबालिकाको तुलनामा गर्भवती महिलाहरु लामखुट्टेको टो’काईको दृष्टिले बढी जो’खिममा हुन्छन्। अध्ययन अनुसार गर्भवती महिला अन्यको तुलनामा दुई गुण बढी जो’खिममा हुन्छन् ।
३. तपाईमा मस्क्युटो म्यागनेट जिन हुनुपर्छः तपाईको शरिरमा लामखुट्टेलाई आर्कर्षित गर्ने जीन छ भने पनि धेरै लामखुट्टे झुम्मिन्छन्। सन् २०१३ मा प्रकाशित जेनेटिक्स एन्ड इभोलुसनमा मानिसमा हुने ह्युमन ल्युकोसाईट एन्टिजेनले मानिसमा बढी लामखुट्टे आर्कर्षित गर्।
यी जिनले मानिसको शरिरबाट आउने गन्धलाई नियन्त्रण गर्छन् । मानिसले निस्काशन गर्ने रसा’यनयुक्त गन्धका कारण लामखुट्टे बढी आकर्षित हुन्छ।